. Vontoatin’ny dian’izy ireo ny hahazoana 5 miliara dolara hamatsiana ny PND (Programme National de Développement) mandritra ny 5 taona eto Madagasikara. Efa azo antoka moa ny hisitrahantsika ny 1,6 miliara dolara amin’io bolongam-bola io, hoy ny fahefana mpanatanteraka. Tanjona kosa ny famenoana ilay 3,4 miliara dolara mandritra ity fihaonana amin’ireo mpiara-miombon’antoka teknika sy ara-bola tranainy sy vaovao ao an-drenivohitra frantsay ity. Miisa 50 moa ireo tetikasa maty paika hisy akony mivantana amin’ny fiainam-bahoaka haroso eo anoloan’ireto farany, araka ny efa nambaran’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier. Be tokoa ny fanantenana taorian’ny fampiantranoantsika ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia 2016 teo. Fepetra mipetraka hatrany takian’ireo mpampiasa vola amin’ny ankapobeny anefa ny fitantanana mahomby, ny filaminana politika sy ekonomika ary ny fitoniana eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana. Andrasana izay ho tohiny.